Halkee lagu qubaa qashinka laga qaado Magaalada Muqdisho?+Sawiro | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka January 20, 2016	0 372 Views
Muqdisho (Himilonews) – Howlaha nadaafadeynta ah ee ay bilaabeen shirkado dhowr ah oo caasimadda ku sugan, shaki lagama muujin karo sida ay wax uga badaleen heerka bilic ee degmooyinka kala duwan ee Muqdisho–waxaase hubaal noqotay sida ay usii yaraadeen qashinadii cuyuubsanaa waddooyinka xaafadaha halkaas oo dariiqaad martaba aad ku arki kartay tiro jawaanno ah oo lagu cabbeeyey qashin ama godad-qashin oo kahor qodan guryaha oo bullaacad ahaan loo adeegsado.
Taasi waa bilowga bilic ee magaalo dib ugu soo laabaneysa muuqaalkii quruxda badnaa ee lagu yiqiin 30-sano kahor. Magaalo 1980-kii noqotay caasimadda ugu nabadda iyo nadaafadda qurxoon Afrika hodanka ah.
Qashin aan la ururin waa dhibaato dunida saddexaad halis ku ah caafimaad ahaan. Balse anba-qaad ol’olaha: inta uu qashinku kuu jiro ayuu cudurku kuu jiraa, natiijadiisa ugu weyn ma ahan ururinta iyo ku qubista meel loogu tala-galay in lagu gubo, sida dad badani qabaan.
Halka qashinku nagu hayo dhib caafimaad, dalalka horumaray waxay ku qabaan dheef ganacsi lacag ka sameyntiisa. Sida ay horayba u yiraahdeen “A country’s trash is another country’s treasure” oo macnaheedu yahay “Dal qashinkiisa wa quudka dal kale,” Jarmalka ayaa soo galaya booska koobaad ee dalalka qashinka u badala hanti lacag laga sameeyo. Gebi ahaan qashinka ay maalinle usoo saaraan muwaadiniinta Jarmalka, waxaa dib loogu celiyaa warshadeyn–halkaas oo dib loo adeegsado mar labaad. Halka xaabada iyo xashxashka soo harana laga dhaliyo danab-koronto.
Afrika ayaa sanadkiiba soo saarta qashin ku dhow 70-malyuun oo tan. Hayeeshe, nasiib daro 10% ayaa laga isticmaalaa sida ay soo xigatay qeybta deegaanka u qaabilsan Bangiga Adduunka.
Soomaaliya, oo hadda un kasoo kacaysa dheelallawga ay 20-sano ka badan dhex miraneysay, waxaa iska cad inay la qabsan karto hal-fikirka maskaxeed ee ku foorara qaabka ugu fudud ee lacag looga sameyn karo qashinka, haddiiba la helay dhalinyaro Afrikaan ah oo aduun lacageed ka sameeyey raasamaalka qashinka.
Balse inta fikirkaas dhalanayo, shaqo la’aanta taagan waxay baaqi la noqonaysaa gudaha dhalinyaro muruqa iyo maskaxdaba ka gaaxsan balse godlan kari la’.
Wariye Cabbaas Xussein Muse oo kamid ah idaacadda Mustaqbal ayaa booqday halka lagu qubo qashinka laga qaado magaalada Muqdisho.
Halkan guji si aad u dhageysato warbixintiisa oo cod ah: http://himilonetwork.com://www.mustaqbalradio.com/?p=42943
Sawirrada waxaa soo qaaday: Wariye Cabbaas Xussein Muuse
Previous: Dalalka ugu fiican ee Hooyo lagu noqdo iyo kuwa ugu liita ee Hooyo lagu noqdo
Next: 44 sano kadib, maxaan ku soo kordhinay Qoraalka iyo ku hadalka Af Soomaaliga?